Mapzen Mapping Platform Inobatanidza Linux Foundation | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura, lIyo Linux Foundation yakazivisa iyo Mapzen (yakavhurika sosi mepu chikuva) ikozvino chikamu cheiyo Linux Foundation chirongwa. Mapzen inotarisa pazvinhu zvikuru zvekuratidzwa kwemepu, sekutsvaga nekufamba.
Inopa vanogadzira software yakavhurika uye nyore kuwana data seti. Yakavhurwa muna2013 nemaveterans eiyo cartography indasitiri pamwe chete nevarongi vemumaguta, vagadziri, vagadziri vemamuvhi, uye vavaki vemitambo yemavhidhiyo.
Randy Meech, aimbova CEO weMapzen uye aripo CEO weStreetCred Labs, akati: "Mapzen anofara kujoina Linux Foundation nekuenderera mberi nenzira yedu yakavhurika uye yekushandira kuronga mepu uye data.
Yakagovaniswa tekinoroji inogona kuve inoshamisa simba, asi zvakare yakaoma uye yakaoma. Iyo Linux Foundation inoziva nzira yekugonesa kubatana pakati pemasangano uye ine mukurumbira wakanaka wekubata unoshanda uye wakabudirira data uye software mapurojekiti.
1 Mapzen anosimuka kubva mumadota
1.1 Zvese ndezvekubatsira
Mapzen anosimuka kubva mumadota
Varwi vanoverengeka veindasitiri yemepu vakaparura Mapzen muna2013, uye yakatanga kurarama muna2015, ichishanda sebhizimusi rinoshanda nevashandi kusvika munaNdira 2018, asi matekinoroji avo emepu anga atooneka kuti akasimba uye anozivikanwa.
Kunyange payanga ichivhara, kambani yakazivisa nzira dzevashandisi kuwana rutsigiro rurefu mushure mekushaikwa kwake, zvichiratidza kuti anogona kunge asati afa izvozvi.
Iye zvino Izvo zvinonetsa zviri zvishoma sezvo iyo Linux Foundation inotora kutonga kweMapzen matekinoroji. yekuchengetedza mepu chikuva ichivandudzwa uye kushandiswa neakavhurika sosi nharaunda uye vashandisi kutenderera pasirese.
Mapzen yakavhurwa mapurojekiti uye zviwanikwa zvinoshandiswa kuvaka zvinoshandiswa kana kuzvisanganisa mune zvimwe zvigadzirwa uye mapuratifomu.
Nekuti zviwanikwa zveMapzen zviri pachena, vagadziri vanogona kuvaka mapuratifomu pasina zvirambidzo zvevamwe seti dzevatengesi ve data.
Mapzen inoshandiswa nemasangano akadai seSpapchat, Foursquare, Mapbox, Eventbrite, The World Bank, HERE Technologies, uye Mapillary.
NeMapzen, zvinokwanisika kutora yakavhurika dhata uye kuvaka mepu nekutsvaga uye nzira dzekufambisa, gadziridza ako maraibhurari uye gadziridza data munguva chaiyo. Izvi hazvigoneke neakajairwa mepu kana geotracking masevhisi.
Iyo inopa yakasarudzika geographic tarisiro iyo inotibvumidza isu kuti tivandudze zvakanyanya pamusoro pekuti chikuva chedu chinofunga sei nezve zviitiko uye nzvimbo dzadzo. Mapzen chirongwa chinoshamisa uye tinofara kuchiona chichibatana neLinux Foundation.
Dai Mapzen anga asina kupinda muLinux Foundation, Samsung ingadai yakachengeta iyo copyright yekuvhura software iyo iri kuvandudzwa uye inoshandiswa zvakanyanya nemamwe makambani mazhinji kunze kwayo.
Vhura marezinesi angadai akashandiswa (kunze kwekunge dzagadziriswa nemuridzi wekodzero), asi munhu wese akabvuma kuti imba yakajeka uye yekusingaperi yeMapzen IPs ese mushure mekudzima zvingave zviri nani kwazvo, uye zvakanyanya mumweya weprojekiti yeMapzen kubva pakutanga.
Iye zvino chero bhizinesi kana munhu anogona kuramba achishanda pasoftware aine chivimbo.
Panguva ino, hapana vashandi veMapzen vachange vachishandira iyo Linux Foundation. Iyi danho ndere kungogadza copyright uye marezinesi kujekesa pane yekutengesa-yakasimba software uye dhata kumabhizinesi mazhinji nemasangano.
Mapzen inoshandiswa mugore uye pane nzvimbo nemasangano akasiyana siyana, anosanganisira Tangram, Valhalla, uye Pelias.
Jim Zemlin, CEO weLinux Foundation, akati: "Mapzen nzira yakavhurika yesoftware nedata yakagonesa vanogadzira nemakambani kugadzira matsva ekushandisa-enzvimbo akachinja hupenyu hwedu.
Tinotarisira kuwedzera zvaMapzen zvakatonyanya kutenderera pasirese munzvimbo dzakaita sekufambisa uye manejimendi manejimendi, varaidzo, kutora mifananidzo uye zvimwe kugadzira kukosha kutsva kwemabhizinesi nevatengi.
Sekureva kwepamutemo kuburitswa kwenhau, iyo Linux Foundation ichaenzanisa zviwanikwa kuti ifambisire mberi kwaMapzen mishoni uye nekukudziridza iyo ecosystem yevashandisi uye vanogadzira vakatowedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mapzen Mapping Platform Inobatanidza Linux Foundation